Rome Waxay Leedahay Buundo Cusub: Mashruucii Aan La Dhammeyn Ee Michelangelo Haatan La Dhameeyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Rome Waxay Leedahay Buundo Cusub: Mashruucii Aan La Dhammeyn Ee Michelangelo Haatan La Dhameeyay
Jebinta Wararka Yurub • Faallo • Education • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Rome waxay leedahay buundo cusub, ama halkii qayb ka mid ah, lagu dhisay waqti rikoodh ah boqolaal mutadawiciin ah. Kani waa Ponte Farnese, oo ah shaqo dib ugu noqonaysa mashruucii aan dhammaystirnayn ee Michelangelo ee furaha jawiga u waara ee ay ku dul sabayn karto hawada.
Buundada, oo dhererkeedu yahay 18 mitir, gebi ahaanba waxay ka samaysan tahay kartoon waxaana ku haysa sedex buulood oo waaweyn.
Tani waa natiijada hal-abuurka farshaxanka Faransiiska Olivier Grossetete oo ku timid hindisaha Safaaradda Faransiiska oo ay weheliso Institut Francais Italia.
Kooxda Webuild ayaa sidoo kale taageertay mashruucan iyadoo lala kaashanayo Villa Farnesina-Accademia dei Lincei.
Ponte Farnese, oo loogu magac daray "Ponte tra le Epoche," (Buundada udhaxeysa Epoch) ayaa la daah furay fiidkii July 13, 2021, iyada oo kor loo qaaday shaqada qaybta Tiber ee u dhow Ponte Sisto. Waxay ku sii jiri doontaa ganaax dhererkeedu yahay 18 mitir illaa iyo Luulyo 18, markaasoo la furi doono oo kartoonka loo adeegsaday dhismaha - dhammaantood dib loo cusbooneysiiyay.
Dhismaha waxaa lagu fuliyay qaab dhisme "duulaya" oo leh aqoon isweydaarsiyo u furan dadka da 'kasta leh iyo tilmaamaha farshaxanka Faransiiska iyo joogitaanka kooxdiisa.
Grossetète kuma cusba nooca noocan ah ee dhismaha ku meel gaarka ah. Waxay ku rakibeen shaqooyin la mid ah Faransiiska, Isbaanishka, Shiinaha, iyo Ruushka.